सरकारी कर्मचारी समायोजनमा सबै भन्दा बढि आर्कषण काठमाडौँ महानगरपालिकामा, प्रदेशमा ३ नं. अगाडि
काठमाडौं । समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकतामा सात प्रदेशमा प्रदेश नं ३ र ७५३ स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका परेका छन् । कर्मचारीको समायोजनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको प्रदेश नं ३ मा..
नेपाल मै पहिलो पटक धुलिखेलमा साहसिक खेल ‘जिपलाइन’ शुरु हुँदै, २५ सय रुपैयाँमा खेल्न पाइने
बनेपा। पर्यटकीय क्षेत्र धुलिखेलमा आकर्षक तथा साहसिक खेल ‘जिपलाइन’ व्यवसाय छिट्टै सञ्चालन हुने भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–८ र पाँचखाल नगरपालिका–५ को सिमानामा पर्ने खावामा ‘वर्ल्डवाइड एड्भेञ्चर प्रालि’को सञ्चालनमा सो..
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई बोनश नदिन सांसदले प्रस्ताब गरेका छन् । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बोनस ऐनमा सांसद प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव..
काठमाडौं । सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा एक एक जना रोजगार संयोजक नियुक्त गर्नका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। करारमा कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाउन रोजगार संयाजकको पदपूर्ति प्रक्रिया र सेवा सुविधा..
खाद्य संस्थानले माग्यो ४७ कर्मचारी, एसएलसीलाई पनि अवसर
काठमाडौं। नेपाल खाद्य संस्थाले प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ बरिष्ठ अधिकृतदेखि सहायक पदसम्मको लागि ४७ जना कर्मचारी माग गरेको छ। संस्थानले ७औं तहको वरिष्ठ अधिकृतमा एक जना, छैठौं तहको अधिकृत तहको लागि ११..
Results 878: You are at page 10 of 30